“အတွေးစလေးတွေ”: အစိမ်းရင့်ရောင် အလွမ်း ( ၅ ) ( ဇာတ်သိမ်း ) . . .
Posted by Han Kyi at 9:25:00 am
အသက်ကြီးပေမဲ့ အသဲနုတယ် ဆရာရေ...
ဒီလိုမျိုးစာတွေ မဖတ်ရဲဘူး။ နှလုံးရောဂါ ရလိမ့်မယ်။ ဘယ့်နှယ် သေကွဲကြီး။း(
အဲဒီ ဆရာဝန်လဲ အခုထက်ထိ မီလေးကို သတိရနေမှာ သေချာတယ်။ မွေးနေ့ကို ကုသိုလ်လုပ်ပြီး အမျှဝေပေးလိုက်ဦးနော။ သူ့ခမျာ ဆရာ့အမျှဝေသံကို စောင့်မျှော်နေရှာမှာ။ အဲဒီဆရာဝန်လဲ စာရေးရင်း မျက်ရည်ကျနေလောက်တယ်။ သနားပါတယ် မီကို။
ဒီမွေးနေ့မှသည် အသက်ရာကျော် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ကျန်းကျန်းမာမာ အိမ်ထောင်ရေးသာသာဖြင့် လူသားတို့အား ချမ်းမြေ့ပျော်မှု ပေးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အမျှ အမျှ အမျှ။
မင်္ဂလာရှိသော မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ ဆရာဟန်ရေ ...
အချိန်ရမှ အစအဆုံး ပြန်ဖတ်ပါအုံးမယ်။ ခုတော့ အချိန်လုပြီး အပြေးအလွှား ကျော်ဖတ်သွားရတာ ခွင့်လွှတ်ပါရှင်။
မွေးနေ့လေးမှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာနဲ့ စာတွေအများကြီးရေးနိုင်ပါစေနော်။
အိမ်း.. လူလည်းမျော့သွားတာပဲ ဆရာကြည်.... ဘာလို့လဲမသိဘူး.. အဲဒီဆရာဝန်နေရာမှာ ဆရာကြည့်ကိုသာမြင်ပြီးဖတ်သွားမိတယ်.. (မဒမ်ဟန်ရဲ့ အဆွဲအလိမ်လေးမိဦးမယ်.. (((( ဟမ် ))))) :P....
ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေဗျာ....... စိုင်းစိုင်းလိုမျိုး.. ဟန်ဟန်ရှိုးလေးလည်း မကြာခင်ပေါ်ထွက်လာပါစေဗျာ.. အဟီး..
အစိမ်းရင့်ရောင်အလွမ်းကို အပြီးသတ်အားပေးသွားပါတယ် မီကိုအရမ်းသနားသွားရပါတယ်...
Novel is good and also comments of Tha Gyi Min. They are so funny and fit Saya Han. :)
၀တ္ထုလေးကောင်းပေမယ့်လို့ သေစေခွဲတာကတော့ အတော်ကို ရက်စက်လွန်းတယ် သူကြီးမင်းရဲ့စကားကိုငှားပြောရရင်ဖြင့် မခံစားနိုင်ဘူး အသည်ငယ်တယ်။
များစွားတိုင်အောင် စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းဖြင့် ပညာ၏ အကျိုးကို ဆထက်တပိုးသယ်ပိုးနိုင်ပါစေဗျာ။
ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေဗျာ... ဆရာဟန်ကလည်း မွေးနေ့ဆိုပြီးတော့ ဇာတ်သိမ်းကောင်းအောင် ပြင်ရေးလိုက်ပါတော့လားဗျာ.... မွေးနေ့မှာ မျက်ရည်စို့စို့နဲ့။ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ကောင်းတယ်ဗျို့...
ရင်နင့်အောင် ရေးတတ်တဲ့ ဆရာရေ . . .
အခြားသူတွေကတော့ အလွမ်းနဲ့ ဇာတ်သိမ်းတာ
ကျွန်တော်ကတော့ အလွမ်းတွေကို ကြိုက်ပါတယ်
ဆရာရေးထားတာလေး လွမ်းရပါတယ် ဆရာ
လွမ်းတတ်လွန်းလို့ မောင်ဘကြိုင်လည်း အလွမ်းသမားဖြစ်နေတယ်ဆြာ
ဆြာ့ဇတ်လမ်းကိုဖတ်ပြီး ကောင်မလေး ဆရာဝန်ဖြစ်မယ့်အချိန်ကို ကြိုစိတ်ကူးကြည့်မိနေတာအခုတော့ဆြာရယ် သွားရှာပြီ
Happy Birthday ပါဆရာ... ဒါနဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး က ကိုယ်တွေ့လားဟင် ဖုန်သုတ်ပြီး တင်လိုက်ပေမဲ့ ကောင်းပါတယ်ဆရာ
အပိုင်း ၃နဲ့၎ဖတ်ပြီး ပျော်စရာဇာတ်သိမ်းလေး ဖြစ်မှာဘဲလို့ မျှော်လင့်နေမိတာ
ဇာတ်သိမ်းဖတ်လိုက်မိမှ တက်တက်စင်ကို လွဲတော့တာဘဲ
ပျော်ရတော့ပါမယ်ဆိုမှ သွေးကင်ဆာက နှောက်ယှက်ရက်ပါပေတယ်။
အဲဒီသေမင်းကလည်း သူများတွေ ချစ်ကြမယ်ဆို မနာလိုဖြစ်ပြီ။
ဦးဟန်ကြည်ရဲ့ ငယ်မူငယ်သွေးလက်ရာက တကယ့်ကို ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး ကြေကွဲဖွယ်ရာပါလားနော်။
ရင်ထဲ နင့်သွားတာပဲ ဆရာဟန်ရေ..ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးပါ..Happy Birthday Belated ! မွေးနေ့ မှသည် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ ပါစေ..
ဆရာ စာအရေးအသားတွေ ကောင်းလှ မှက်နေတာ
ဟိုးအရင်ကတည်းက လက်စွမ်းထက်နေတာကိုး)
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သောအချိန်များကို အသက်ထင်ရှားရှိသမျှကာလပတ်လုံး ရရှိနိုင်ပါစေ.
အားလုံးစုပြီးဖတ်လိုက်မှပဲ ဇာတ်ကိုလည်းခြုံမိသွားသလို ကိုဟန်ကြည်ရဲ့အရေးကိုလည်း လေ့လာမိသွားတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာကရေးတယ်ဆိုပေမယ့် လက်ကစကားပြေလက်ဗျ။ ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ ကိုဟန်ကြည်ပြောတာတော့ ဇာတ်နောက်ပါသွားတယ်ပြောတာပဲ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ အားလုံးကောင်းပါတယ်။ ကိုယ့်အမျိုးသမီးကိုတော့ကိုယ့်ဘာသာတောင်းပန်ပေ့ါဗျာ။ ကျွန်တော်တောင်ဖတ်နေရင်း တကယ့်အဖြစ်လားလို့တွေးနေသေးတာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝတ္ထုတိုအရေးနည်းတယ်ဆိုပေမယ့် ရေးထားတဲ့ဟာကကောင်းနေလေတော့ ရေးဖို့ဖန်လာခဲ့ရင်ရေးပါဦးလို့သာတိုက်တွန်းချင်တော့တာပါပဲဗျာ။
အစိမ်းရင့်ရောင် အလွမ်းကို အစမှအဆုံး ထိုင်ဖတ်သွားပါတယ်။ ပျော်ရမဲ့ဇာတ်လမ်လေးထင်တာ အလွမ်းနဲ့ဇာတ်သိမ်းသွားတယ်။